အဘိုးဖြစ်သူမှ ၁၄နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစဉ်(၁၅)ရက်ခန့် အလိုမတူဘဲ ပြုကျင့်... - MM Live News
အဘိုးျဖစ္သူမွ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ေျမးမေလးအား အလိုမတူပဲ အဓမၼျပဳက်င့္
ေတာင္တြင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၄) AlinnMyay(အလင္းေျမ)
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္ပြန္းေတာင္အုပ္စု၊ ကသာေက်းရြာေန၊ ဦးျမင့္စိုး (သ)၅၁ႏွစ္ (ဘ)ဦးၾကည္‌မာင္သည္ ၊ေနအိမ္တြင္ရွိေနစဥ္၊ ဇနီးျဖစ္သူ မစန္းယုႏြယ္(ခ)မဇာ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ၊ ဦးလွေဝ(သ)၅၇ႏွစ္၏ေနအိမ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ(၇)ႏွစ္ခန္႔ကအတူေနထိုင္ေသာ…..
၎တို႔၏ သမီးျဖစ္သူ မ———-(သ)၁၄ႏွစ္သည္ (၂၇.၁၁.၂၀၁၉)ေနအိမ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ျပန္လည္‌‌ေျပာျပသိရွိရသည္မွာ၊ဦးလွေဝ၏ ဇနီးျဖစ္သူေဒၚဆင့္မွာ ရွမ္းျပည္ဘက္သို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသျဖင့္ ၊ေနအိမ္တြင္ေျမးျဖစ္သူ မ——— ႏွင့္ အဖိုးျဖစ္သူ ဦးလွေဝတို႔ ၂ဦးတည္းသာ ရွိေၾကာင္း…..
မ——— အား ရက္(မမွတ္မိ)လြန္ခဲ့ေသာ(၂)လေက်ာ္ခန္႔က၊ အဖိုးျဖစ္သူ ဦးလွေဝမွာေန႔စဥ္ အရက္ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး ညစဥ္(၁၅)ရက္ခန္႔ အလိုမတူဘဲ သားမယာအျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး၊ ဦးလွေဝမွ မ——— အား ဘယ္သူ႔ကိုမွျပန္မေျပာရန္ ၊ျပန္ေျပာလၽွင္ သတ္ပစ္မည္ဟုေျပာဆိုၿပီး….
မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပစမ္းရြာေန၊ ဦးလွေဝ၏ သမီးျဖစ္သူ၊ မသန္းသန္းဝင္းေနအိမ္သို႔၊ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လခြဲခန္႔က ဦးလွေဝမွ ပို႔ထားခဲ့ေၾကာင္း (၂၇.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္မိခင္ျဖစ္သူ မစန္းယုႏြယ္(ခ) မဇာမွသြားေရာက္ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး၊ အေၾကာင္းစုံသိရွိရသျဖင့္…..
အရြယ္မေရာက္ေသးသူ သမီး မ——— အား၊ အလိုမတူဘဲ သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္သည့္၊ ဦးလွေဝအား အေရးယူေပးပါရန္၊ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးျမတ္စိုးမွ တရားလိုျပဳတိုင္တန္းလာသည့္ အတြက္ ၊ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆတ္သြားနယ္ေျမရဲစခန္းမွ(ပ)၁၃၆/၂၀၁၉-ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၇၆ျဖစ္အမႈဖြင့္စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
အဘိုးဖြစ်သူမှ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မြေးမလေးအား အလိုမတူပဲ အဓမ္မပြုကျင့်
တောင်တွင်း၊ ဒီဇင်ဘာ(၄) AlinnMyay(အလင်းမြေ)
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကင်ပွန်းတောင်အုပ်စု၊ ကသာကျေးရွာနေ၊ ဦးမြင့်စိုး (သ)၅၁နှစ် (ဘ)ဦးကြည်‌မာင်သည် ၊နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ်၊ ဇနီးဖြစ်သူ မစန်းယုနွယ်(ခ)မဇာ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ၊ ဦးလှဝေ(သ)၅၇နှစ်၏နေအိမ်တွင် လွန်ခဲ့သော(၇)နှစ်ခန့်ကအတူနေထိုင်သော…..
၎င်းတို့၏ သမီးဖြစ်သူ မ———-(သ)၁၄နှစ်သည် (၂၇.၁၁.၂၀၁၉)နေအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး၊ပြန်လည်‌‌ပြောပြသိရှိရသည်မှာ၊ဦးလှဝေ၏ ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဆင့်မှာ ရှမ်းပြည်ဘက်သို့ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသဖြင့် ၊နေအိမ်တွင်မြေးဖြစ်သူ မ——— နှင့် အဖိုးဖြစ်သူ ဦးလှဝေတို့ ၂ဦးတည်းသာ ရှိကြောင်း…..
မ——— အား ရက်(မမှတ်မိ)လွန်ခဲ့သော(၂)လကျော်ခန့်က၊ အဖိုးဖြစ်သူ ဦးလှဝေမှာနေ့စဉ် အရက်သောက်စားမူးယစ်ပြီး ညစဉ်(၁၅)ရက်ခန့် အလိုမတူဘဲ သားမယာအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး၊ ဦးလှဝေမှ မ——— အား ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောရန် ၊ပြန်ပြောလျှင် သတ်ပစ်မည်ဟုပြောဆိုပြီး….
မကွေးတိုင်း၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ သပြေစမ်းရွာနေ၊ ဦးလှဝေ၏ သမီးဖြစ်သူ၊ မသန်းသန်းဝင်းနေအိမ်သို့၊ လွန်ခဲ့သော တစ်လခွဲခန့်က ဦးလှဝေမှ ပို့ထားခဲ့ကြောင်း (၂၇.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်မိခင်ဖြစ်သူ မစန်းယုနွယ်(ခ) မဇာမှသွားရောက်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး၊ အကြောင်းစုံသိရှိရသဖြင့်…..
အရွယ်မရောက်သေးသူ သမီး မ——— အား၊ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သည့်၊ ဦးလှဝေအား အရေးယူပေးပါရန်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမြတ်စိုးမှ တရားလိုပြုတိုင်တန်းလာသည့် အတွက် ၊တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဆတ်သွားနယ်မြေရဲစခန်းမှ(ပ)၁၃၆/၂၀၁၉-ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၇၆ဖြစ်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံကျော်ဆိုင်းဆရာကြီး စိန်စတင်း ကွယ်လွန်
November 3, 2019 November 3, 2019 MM Live
လင်မယားကိစ္စ ဇနီးဖြစ်သူက နှစ်ကြိမ်တိုင် ငြင်းဆိုသဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကြိုးဆွဲချ သတ်သေ
October 23, 2019 MM Live
မြန်မာပြည်က ဝိသမသ စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့် အတော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ကြက်သွန်ဈေးကွက်